Ugbo osisi na-elekọta | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ugbo osisi na-elekọta
Ụkpụrụ nke ogbugba mmiri n'ubi nke kabeeji na-emeghe n'ala
Fọrọ nke nta ka ndị ọrụ ubi nile na-eto eto n'ubi. Otú ọ dị, ihe oriri a chọrọ nlekọta pụrụ iche, karịsịa ma a bịa n'ịgbara mmiri. N'isiokwu anyị, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi ṅụọ mmiri kabeeji mgbe ị kụrụ n'ala iji nweta ọganihu bara ụba ma dị ụtọ. Ọnọdụ maka ịba ụba na-eto eto Na-eto eto kabeeji bụ ọrụ siri ike.
Nzuzo nke kụrụ na ilekọta piom
Dịka osisi ọ bụla nke ubi, osisi pọmrị nwere oge ya na ihe ọ chọrọ maka ịkụ ihe. Ọ dị ezigbo mkpa iburu ha n'uche, n'ihi na ntakịrị njehie nwere ike igbochi ma osisi ma osisi owuwe ihe ubi a na-echere. N'isiokwu a, anyị na-akọwa atụmatụ niile na atụmatụ nke ịgha mkpụrụ osisi, na-agwa gị otu esi ahọrọ ebe kwesịrị ekwesị maka ya ma lekọta ya n'oge dum.
Na-eto eto olulu: ndụmọdụ nke onye na-elekọta ubi
Mgbe ụfọdụ, na-eri mkpụrụ osisi dị ụtọ, enwere ọchịchọ ịgbalị ịkpụ ọkpụkpụ iji nweta osisi ọhụrụ na-amị mkpụrụ. Ndị nnọkọ ahụ nwere ọtụtụ ajụjụ banyere ma ị nwere ike ibu osisi ma ọ bụ omenala ọ bụla ọzọ na-amịpụta site na nkume dị n'ụlọ. Enwere ike ime nke a, mana o siri ike, n'ihi na tupu ị kụọ osisi na nkume, ọ dị mkpa ịkwadebe.
Kedu ihe bụ Hungary plum na otú e si eto ya n'ógbè m
N'ime ụwa, e nwere ihe dị ka mkpụrụ osisi iri 30. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha ka na-ekewapụ onwe ha na alaka ha - ndị na-azụ atụrụ. Na ihe taa anyi ga ekwu okwu banyere ụdị nke Hungarian plum. Njirimara na njirimara nke osisi nke Hungarian Hungarian bụ nnukwu ìgwè dị iche iche nke ụlọ osisi.
Atụmatụ nke na-eto eto ndị China: kụrụ na ilekọta
Mkpụrụ osisi Chinese adịghị adịkarị n'ubi anyị, mana ndị ka na-anụ ọkụ n'obi na-anwa ịme ya. A sị ka e kwuwe, ọ na-atọ ụtọ mgbe niile na mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, na-enye ọmarịcha oge na-amị mkpụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị nke plums ndị a na-adị mfe ime ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ọnọdụ ala, siri ike, na-eguzogide ọrịa na pests.
Ihe dị iche iche nke Hungary plum
Plum Hungary ghọrọ onye kachasị mmasị n'etiti ndị ọrụ ubi. Ụdị dị iche iche yiri uwe odo odo na-acha odo odo nke mkpụrụ osisi, na aka aka na-acha anwụrụ ọkụ, na osisi Hungary yiri akwa n'ile. Naanị site na plums nke Hungary iche-eme prunes, dị ka ha nwere ọtụtụ pectin, sugar na akọrọ bekee. A na-eji osisi na-esi nri ma rie nri ọhụrụ.
Tomato "Ọnụ ọgụgụ": nkọwa nke dịgasị iche iche na tomato buru ibu na mkpụrụ mkpụrụ osisi
Birch buds: ihe ha na-enyere na ihe ha na-emeso, otú e si ime biya ma tinye
Kedu esi eme ka igwe na-ekpo ọkụ na-ese siga na-emepụta ihe
Nwa ewu kwụsịrị inye mmiri ara ehi: akpata na ụzọ iji kpochapụ ha
Ghọta na papiopedilum orchid - atụmatụ nke nlekọta ụlọ na foto ifuru
Udara "Julia": njirimara, uru na nkpu
Ọ ga-ekwe omume iji reanimate orchid, ma ọ bụrụ na mgbọrọgwụ na-agbanwe, ngwa foliar
Ntụziaka nke salad nri na ihe oriri na-edozi na kabeeji Chinese, nke ndị ọbịa gị ga-abụ ndị nzuzu!